Wararkii Ugudambeeyay ee Caalamka iyo warqabadka SBC International – SBC
Wararkii Ugudambeeyay ee Caalamka iyo warqabadka SBC International
Qadaafi oo beeniyey in uu ka cararay dalka Libya islamarkaana hanjabaad u diray NATO
Tripoli:-Hogaamiyaha dalka Libya Colonel Mucammar Al-qadaafi ayaa beeniyey wararka sheegaya in uu u baxsaday dalka Niger, wuxuuna ku adkeestay in uu joogi dalkiisa islamarkaana jab gaarsiin doono Isbahaysiga NATO ee ka caawiyey mucaaradka in ay xukunka ka tuursaan Mucammar Al-qadaafi.
Qadaafi oo soo diray fariin cod ah oo uu baahiyey kanaalka Al-Ra’yi ee xaruntiisu tahay Syria ayaa sheegay in wararka ku aadan in uu u baxsaday Niger ay tahay dagaal maskaxeed iyo been.
Qadaafi oo la yaaban hadalka ka soo yeeray warbaahinta caalamka ayaa tilmaamay in dadku maalin kasta ay u gudbiyaan badeecado dalalka Niger, Sudan, Mali, Chad iyo Algeria, waxayna kadhigayaan in markii ugu horeysay kolonyo gawaari ah ay galeen dalka Niger.
Qadaafi ayaa ku nuuxnuuxsaday in NATO ay ku fashilmi doonto waditaanka howlgalada islamarkaana jamaahiiriyadda Libya ay markale dib u soo noolaan doonto.
Afhayeenka maamulka madaxweyne Qadaafi ayaa maalintii shaley sheegay in colonel Qadaafi uu caafimaad qabo, Islamarkaana uu qorsheenayo sidii uu uga difaaci lahaa dalkiisa waxa uu ku sheegay in ay yihiin Shayaadhiin.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka haweenayda lagu magacaabo Victoria Noland ayaa sheegtay in mas’uuliyiinta mareykanka ee ku sugan xarunta dalka Niger ee Niyaami la soo gaarsiiyey in kolonyada gawaarida soo gashay dalka Niger ay waday 12 kamid ah mas’uuliyiintii xulufada la ahayd Qadaafi balse ma aysan tilmaamin Qadaafi uu kamid ahaa.
Ergayga mareykanka ee dalka Sudan oo ka digay dagaal kadhaca xuduudka Sudan
London:- Ergeyga mareykanka ee dalka Sudan Preston Lyman ayaa sheegay in dowladda koonfurta Sudan ay suurtagal tahay in ay ku dhiirato in ay ku dagaalanto gobolada Niilka Buluuga iyo koonfurta Kordufaan ee dalka Sudan.
Lyman ayaa uga digay xukuumadda koonfurta in ay kulugu lahaato rabshada kadhaca deegaanadaas.
Kumaankun oo qof ayaa ka cararay dagaalka u dhexeeya ciidanka Sudan iyo falaagada gacan saarka la leh koonfurta Sudan.
Lyman ayaa tilmaamay in hardankaas uu caqabad ku noqday in dib loo taabageliyo xiriirkii Washington iyo Khartoum .
Dowladda mareykanka ayaa cunaqabtayn ku soo rogtay xukuumadda Sudan sanaddii 1997, waxayna ku eedeesay in ay xiriir la leedahay kooxaha mareykanku u yaqaan argagxiso.
Dadka u kuurgala siyaasadda ayaa saadaalinayey in xukuumadda Khartoum ay xiriir wanaagsan la yeelan doonto Washington kagadaal markii ay ogolaatay madaxbanaanida koonfurta Sudan 9 bishii July ee la soo dhaafay taasi oo soo afjari lahayd khilaafkii u dhexeeyey mareykanka iyo Sudan.
Dowladda faransiiska oo ku eedeesay xukuumadda Syria xasuuq kadhan ah shacabkeeda
Paris:-Wasiirka arrimaha dibadda faransiiska Alan Joobee oo shir jaraa’id ay si wadi jir ah ay ugu qabteen magaalada Moscow dhigiisa dalka Ruushka Serjey Lafroof ayaa ku eedeeyey xukuumadda Syria xasuuq ka dhan ah shacabka.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in Syria ay waajihi doonto cunaqabatayn dheeraad ah haddii aysan bedelin siyaasadeeda.
Wasiirka ayaa tibaaxay in uu jeclaan lahaa in xukuumadda Moscow ay ka ogolaato in golaha amaanka fariin culus uu u diro maamulka Madaxweyne Asad si ay u joojiso falalka foosha xun ee kadhanka ah shacabka Syria talaabadaas oo ah mid xukuumadda Moscow ay ku gacan seertay.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ruushka Sergey Lafroof ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay mudnaanta koowaad siinayso wadahadal dhexmara maamulka Syria iyo quwadaha mucaaradka si ay u dhicin mid lamid ah xaaladda Libya.
Lafroof ayaa ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu uu u gudbiyey golaha amaanka mashruuc qaraar looga dalbanyo dhamaan dhinacyada in ay joojiyaan adeegsiga falal fool xun.
Safiirka mareykanka dalka Syria Robert Ford ayaa cambaareeyey xukuumadda madaxweyne Bashaar Al-asad ololaheeda kadhanka ah dadka ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Asad.
Ambassador Ford ayaa ku sheegay page-kiisa Face book ee xiriirka dadweynaha ee Internet-ka in ay jiraan xubno katirsan booliska Syria oo lagu dilay dibadbaxyada ka socda dalkaas lixdii bilood ee la soo dhaafay balse tiradooda ay aad uga yar tahay tirada xukuumadda Syria ay shaaca ka qaaday in ay kudhinteen dibadbaxyadaas.
Safiirka ayaa intaas ku daray in xukuumadda Syria ay mas’uul ka tahay dhimashada labo kun iyo labo boqol oo qof oo lagu dilay dibad baxyada lagu diidan yahay maamulka Bashaar Al-asad, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay QM.
Sunduuqa lacagta carabta oo taageeraya kacdoonada carabta
Dowxa:- Agaasimaha guud ee sunduuqa lacagta dalalka carabta Jaasim Al-manaaci ayaa sheegay in wasiirada maaliyada carabta ay isku raaceen in la taageero dalalka ay ka socdaan kacdoonada kadib kulankoodii aan caadiga ahayn ee kadhacay magaalada Abu Dhabi.
Al-manaaci ayaa carabaabay in uu filayo in dhibaatada dhaqaale ee caalamiga ay saameyn ku yeelato dhaqaalaha dalalka carabta.
Wasiirada ayaa ka hadlay arrimo la xiriira dib u hagaajin ku aadan nidaamka dhaqaalaha iyo arrimo la xiriira mandiqada carabta.
Barlamanka dalka Lubnaan oo u codeenaya qorshaha korontada
Beirut:- toddobaadyo Kadib muran ku aadanaa qorshaha korontada ee uu soo gudbiyey wasiirka tamarta iyo biyaha dalka Lubnaan ayaa waxaa loo gudbiyey qorshahaas barlamanka si uu cod ugu qaado.
Qorshahaas ayaa muran balaaran kadhex dhaliyey xubnaha isbahaysiga xukuumadda lubnaan kadib markii ay ka gaabsadeen axsaabta qaarkood arrimo la xiriiro warbixinta ku saabsan qorshaha iyo qaabka la isugu halayn karo taasi oo horseedi lahayd in ay xukuumadu burburto.